Annaga nagu saabsan - Shandong Huiyang Industry Co., Ltd.
Shandong Huiyang Industry Co., Ltd. waa FSC shahaado saaraha la aasaasay 2003, inta badan ku hawlan cilmi-baarista, horumarinta, wax soo saarka, iibinta iyo adeegga dhammaan noocyada kala duwan ee sanduuqa alwaax, farsamada alwaax, saxaarad alwaax, qurxinta fasaxa alwaax iyo alaabta alwaax.Waxay ku taal Jinan oo leh marin gaadiid oo habboon.U heellan xakamaynta tayada adag iyo adeegga macaamiisha fekerka leh, xubnaha shaqaalahayaga khibradda leh ayaa had iyo jeer diyaar u ah inay ka hadlaan shuruudahaaga oo ay hubiyaan qanacsanaanta macaamilka.
''Tayada sare waa raacdadayada aan joogsiga lahayn.Saddex tilaabo oo hababka kormeerka tayada ayaa kuu dammaanad qaadi kara badeecadaha tayada sare leh iyo gaarsiinta degdega ah ee wax soo saarkeeda sare oo xasilloon.
Sanadihii la soo dhaafay, shirkadeena waxay soo bandhigtay qalab casri ah oo ay ka mid yihiin mashiinka wax lagu tolo, Mashiinka daabacaadda, Mashiinka dhalaalka yar yar, Mashiinka daabacaadda, Mashiinka polishing, Qoryaha afar geesoodka ah, miinshaar laba jibbaaran, miinshaar dhowr ah, mashiinka dharka lagu tolo, Mashiinka xardhaynta Laser , Mashiinka goynta warqadda, Mashiinka kulaylka, Mashiinka wax lagu shubo, Mashiinka daabacaadda, Mashiinka farsamaynta kartoonada.
Intaa waxaa dheer, waxaan helnay shahaadada FSC si aan u hubinno in dhammaan walxahayaga alwaax ah la raadin karo.Waxaan sidoo kale haysanaa EN71, LFGB, CARB.Shahaadada FDA si loo hubiyo in alaabtayada alwaaxdu ay badbaado yihiin.Alaabtayada alwaaxdu waxay si fiican u iibinayaan dhammaan Shiinaha waxaana sidoo kale loo dhoofiyaa Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Yurub, bariga dhexe, Aasiya, koonfurta Afrika iyo Oceania!
Kooxdayada naqshadaynta waxay ka caawisaa macaamiisha inay u rogaan fikradda wanaagsan inay noqoto farshaxanno muuqda.Waxaan naqshadeynaa oo aan sameynaa moodada, soo jiidashada, farshaxanno kala duwan.
Waxaan sidoo kale soo dhaweyneynaa dalabaadka OEM iyo ODM.Haddi aad ka dooranayso badeecada hadda jirta ama aad u raadinayso kaalmada injineernimada ee codsigaaga, waxaad kala hadli kartaa xaruntayada adeega macaamiisha waxyaabaha ku saabsan wax soo saarkaaga.
Waxaanu ku hogaaminaynaa warshadaynta farsamada alwaax in ka badan toban sano.Waxaan bixinaa Nakhshad BILAASH ah, Taageerada OEM, MOQ Hoose, Bixinta Degdegga ah, Muunado bilaash ah iyo adeegga albaabka ilaa albaabka.
Waxaan nahay alaab-qeybiyahaaga iyo lammaanahaaga Shiinaha ee sanduuqa alwaax ee tayada leh iyo farsamada gacanta.Ku soo dhawoow inaad booqato warshadeena.Mahadsanid!